‘टर्की’ नाम बदलेर टर्कीए राख्नुको कारण के हो ? « pennepal.com
‘टर्की’ नाम बदलेर टर्कीए राख्नुको कारण के हो ?
Published On :4June, 2022 6:30 am By :
एजेन्सी । टर्कीले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेको छ । यससँगै अब टर्कीलाई टर्किए भनेर चिनिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले टर्कीले गरेको नाम परिवर्तनको अनुरोध स्वीकार गरेको छ ।
टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानको गत वर्ष रिब्रान्डिङ अभियान अन्तर्गत, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई देशको नाम परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका थिए । गत वर्षको अन्त्यमा, टर्कीका राष्ट्रपतिले पुनः ब्रान्डिङ अभियान सुरु गरे ।
डिसेम्बरको सुरुमा, रेसेप तैयप एर्दोआनले भनेका थिए, ‘टर्कीएले यस देशका जनताको संस्कृति, सभ्यता र मूल्यमान्यतालाई राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दछ र यसलाई उत्कृष्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्दछ ।’
संयुक्त राष्ट्र संघले यो हप्ता अनुरोध प्राप्त हुने बित्तिकै यसलाई परिवर्तन गरेको जनाएको छ । धेरै टर्कीहरूले पहिले नै आफ्नो देशको लागि टर्किए शब्द प्रयोग गरिसकेका छन् । यद्यपि, टर्किश, टर्कीको अंग्रेजी रूप, देश भित्र व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।
टर्कीको सरकारी समाचार च्यानल टीआरटीले गत वर्ष घोषणा गरेपछि मात्र नाम परिवर्तन गरेको थियो । यसका लागि एउटा कारण दिइएको थियो कि क्याम्ब्रिजको अंग्रेजी शब्दकोश अनुसार टर्कीको अर्थ मूर्ख वा पराजित हो ।
रिब्रान्डिङ योजनाअन्तर्गत आगामी दिनमा देशबाट निकासी हुने वस्तुहरूमा ‘मेड इन टर्कीए’ लेखिनेछ र जनवरीमा ‘हेलो टर्कीए’ भन्ने क्याच–फ्रेजसहित पर्यटन अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
यो अभियानले सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । यद्यपि सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई समर्थन गर्छन् । तर धेरैले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्दा पनि राष्ट्रपतिले अर्को वर्षको चुनावको लागि तयारी गर्दा यो ‘असहज’ भएको बताउँछन् । यद्यपि, देशहरूको नाम परिवर्तन गर्नु धेरै आश्चर्यको कुरा होइन ।
यसअघि सन् २०२० मा नेदरल्यान्ड्सले रिब्रान्डिङ अन्तर्गत हल्याण्ड नाम छोडेको थियो । यसअघि ग्रीससँगको राजनीतिक विवादका कारण म्यासेडोनियाले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी नर्थ म्यासेडोनिया राखेको थियो । यसबाहेक स्वाजिल्याण्डले २०१८ मा नाम परिवर्तन गरेर इस्वातिनी राखेको छ ।
इतिहास हेर्दा इरानलाई पहिले पर्सिया भनिन्थ्यो । सियाम अब थाइल्याण्ड बनेको छ र रोडेशिया जिम्बाब्वेमा परिणत भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, धेरै मानिसहरूलाई उच्चारण गर्न गाह्रो लाग्छ । यसको कारण यो हो कि यो अक्षर तिनीहरूको वर्णमालामा छैन, तर यो जर्मन जस्तै छ । जस्तै PURE वा CUE मा U छ .
तर किन चाहियो ?
टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोआनले वर्षौंदेखि यो कुरालाई जोड दिँदै आएका थिए । उनीहरुको तर्फबाट चराको नाम (टर्की) मिल्नुको सट्टा टर्किए नामले बोलाएमा देशको राम्रो प्रतिनिधित्व हुने तर्क थियो ।
केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले टर्की सरकारको यस तथ्यलाई बेतुका रूपमा आलोचना गर्ने कदमको आलोचना गरे, केहीले यो आवश्यक रिब्रान्डिङ थियो भनी सहमत छन् ।
तर यो नयाँ नामले संसारले टर्की वा टर्कीलाई टर्कीएको रूपमा स्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले पर्खनुपर्छ ।